RASMI: Xiddig muhiim ah oo ka tirsan kooxda Real Madrid oo seegi doona kulanka caawa ee Getafe kaddib markii… – Gool FM
(Madrid) 18 Abriil 2021. Ciyaaryahan muhiim ah oo ka tirsan kooxda Real Madrid ayaa la xaqiijiyey goordhow inuu seegi doono kulanka caawa ay la leeyihiin naadiga Getafe kaddib markii uu xiriir la sameeyey qof qaba caabuqa Korona Fayras.
Fede Valverde ayaa seegi doona kulanka caawa 10:00 habeennimo ay booqanayaan Getafe kaddib markii karaantiil loo geliyey in uu xiriir la sameeyey qof qaba caabuqa Korona Fayras.
Bayaan ay soo saartay kooxda Real Madrid ayey ku xaqiijisay in ciyaaryahankeeda Fede Valverde laga bilaabo shalay uu galay xaalad karaantiil ah oo la xiriirta KOFID 19.
“Ciyaaryahankeenna Fede Valverde waxa uu galay xaalad karaantiil ah tan iyo shalay oo ay taariikhdu ahayd Sabti 17-ka Abriil, kaddib markii uu xiriir la sameeyey qof laga helay caabuqa Korona Faryas, inkastoo ciyaaryahanka tijaabooyinkii laga qaaday aan laga helin calaamadaha caabuqaas.”
Tababaraha reer France Zinedine Zidane ayaa horay waxaa kooxdiisa kaga maqnaa Dani Carvajal, Sergio Ramos, Raphael Varane, Lucas Vazquez, Ferland Mendy iyo Eden Hazard oo dhaawacyo kala duwan ku waman, halka Casemiro iyo Nacho Fernandez ay labaduba ganaaxan yihiin.
Xiddiga reer Uruguay ee Valverde ayaa lagu waday inuu booska khadka dhexe ka beddeli doono Casemiro kulanka caawa ka dhacaya Estadio Coliseum Alfonso Perez.
Shaxda rasmiga Kooxaha AC Milan vs Genoa ee horyaalka Serie A oo la shaaciyey... (Yaa ku bilowday safka hore?)